देव गुरुङलाई सभामुख बनाउन दाहाल–नेपाल सहमत, सुरु भयो गृहकार्य – Life Nepali
देव गुरुङलाई सभामुख बनाउन दाहाल–नेपाल सहमत, सुरु भयो गृहकार्य
काठमाडौं, २३ असोज । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आज अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । महिला क’र्मचारीमाथि ज’बरज’स्ती क’रणी गरेको आरोपमा सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले रा’जीनामा दिएपछि अब कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेबारे छलफल गर्न नेता नेपाल प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका हुन् । स्रोतकाअनुसार नेता नेपाल र अध्यक्ष दाहालबीच पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई सभामुखमा अघि सा’र्ने सहमति बनेको छ ।
यसअघि पार्टीको तर्फबाट पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम चर्चामा थियो । तर, स्वयम् नेम्वाङले नै आफ्नो यसमा कुनै रुचि नभएको स्पष्ट पारेपछि अध्यक्ष दाहालले गुरुङलाई अघि सार्न लागेको बुझिएको छ । गुरुङ जनजाति पनि भएको र संसदीय अनुभव राम्रो भएकोले उनलाई सभामुख बनाउँदा उ’त्तम हुने ने’ताद्धय दाहाल र नेपालको निश्कर्ष छ । अहिले नेकपाकै त’र्फबाट डा. शिवमाया तु’म्बाहाङफे उपसभामुख छिन् । अब नेकपाले सभामुखमा दाबी गर्ने भएको हुँ’दा उ’नले राजीनामा दिने बु’झिएको छ ।
संवैधानिक व्य’वस्थाअनुसार पनि एउटै पा’र्टीले सभामुख र उपसभामुख हुन पाईँदैन् । अहिले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। नयाँ अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्नुपर्नेछ। कात्तिकको अन्त्यतिर नै नयाँ अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । गुरुङलाई सभामुख बनाउनुपर्छ भनेर नेता नेपालले पार्टीभित्रै लविङ सुरु गरेको एक नेताले जनाए । नेता नेपाल नेम्वाङलाई बनाउनुहुँदैन् भन्ने पक्षमा छन् ।
Previous यौ’नका’ण्डमा बेलौरी मालपोत प्रमुख प’रस्त्री’सँग रं’गेहात प’क्राउ !
Next चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा तीन घण्टा सवारी सवारी आवागमन ठप्प हुने !